Indima yoTshintsho lweMozulu idlala ngoku ekwandiseni amaqondo okwaliwa
Indawo: Ikhaya » Iindaba zocingo » Indima yoTshintsho lweMozulu idlala ngoku ekwandiseni amaqondo okwaliwa
Uphononongo lwakutsha nje luqaqambisa igalelo le-synergistic lokutshintsha kwemozulu kunye nongcoliseko lomoya kwizifo zokuphefumla.
Ukutshintsha kwemozulu, okubonakaliswa kukunyuka kwamaqondo obushushu, ukuwohloka kongcoliso, izikhukula ezitshabalalisayo, nembalela eqatha, kuchaphazela izigidi zabantu ehlabathini lonke. Ukonyuka kumazinga ongcoliseko-onxulunyaniswa nokungaphefumli okuphefumlayo okufana nesifuba, irhinitis, kunye nehay fever kule minyaka yamva nje kunokunxulunyaniswa nefuthe lokutshintsha kwemozulu. Nangona kunjalo, ngelixa iziphumo zokonyuka kwamaqondo obushushu kunye nongcoliseko lomoya kwezi zifo zikwalanayo ziye zaphononongwa, uphononongo olubanzi lwendlela ezi zinto zichaphazelana ngayo belungekafumaneki ukuza kuthi ga ngoku.
Kuphononongo olupapashwe kwi-Chinese Medical Journal nge-5 kaJulayi ka-2020, abaphandi bashwankathele ubunzima bendlela utshintsho lwemozulu, ungcoliseko lomoya, kunye nezinto eziphuma emoyeni ezifana ne-pollen kunye ne-spores ngokubambisana negalelo kwizifo zokuphefumla. Baxoxa ngendlela utshintsho lwemozulu, kubandakanywa nokushisa okugqithisileyo, kunokuchaphazela ngokuthe ngqo umgudu wokuphefumla kwaye kubangele izifo ze-allergies. Ukongeza, baphinda baqaqambise indima yeentlekele zendalo ezifana neendudumo, izikhukula, imililo yasendle, kunye nezivunguvungu zothuli ekwandiseni isizukulwana kunye nokuhanjiswa kwezinto ezibangelwa ngumoya kunye nokunciphisa umgangatho womoya, ngaloo ndlela kuchaphazela kakubi impilo yabantu. Isishwankathelo senqaku sinikezelwe kwividiyo kwiYouTube.
Lilonke, uphononongo lulumkisa malunga nemingcipheko yezempilo enokubakho enkulu kwixesha elizayo ngenxa yeziphumo eziphindaphindayo zobushushu kunye nezinto eziphuma emoyeni kungcoliseko lomoya. "Uqikelelo lwethu lubonisa ukuba amanqanaba e-particulate matter kunye ne-ozone emoyeni aya kwanda ngokufudumala kwemozulu, kwaye ukunyuka kwamaqondo okushisa kunye namanqanaba e-CO2 kunokunyusa amanqanaba ezinto ezibangelwa ngumoya, zokwandisa umngcipheko wezifo zokuphefumla," utsho uProf. Cun-Rui Huang, owayekhokela eso sifundo.
Ngokudibeneyo, le ngxelo isebenza njenge-call-to-action yophando, uphuhliso, kunye neenzame zokukhuthaza ezivela kubasebenzi bezempilo, ukubeka isiseko sezicwangciso ezisebenzayo zempilo yoluntu. “Amanyathelo alula ocwangciso lwasezidolophini afana nokudala iindawo ezithintela ukungcoliseka komoya ophantsi ezingqonge iindawo zokuhlala, ukutyalwa kwezityalo ezingezo-allergenic, kunye nothango lokuthena ngaphambi kokuba iintyatyambo zicuthe ukuvezwa okunetyhefu kunye nokunciphisa imingcipheko yezempilo. Ukubeka iliso kwimozulu kunye neenkqubo zokulumkisa zinokunceda abasemagunyeni bakhusele abantu abasesichengeni njengabahlali basezidolophini kunye nabantwana kwizifo ezinjalo, "ucacisa uProf. Huang, esongeza ukuba ezo ndlela ziya kubaluleka ekunciphiseni ifuthe lempilo yezifo ezibangelwa zizifo zokuphefumla kwixesha elizayo.
Ngokwenene, umzamo ohlangeneyo uyafuneka ukuze kugcinwe ilungelo lomntu ngamnye lokuphefumla umoya ococekileyo.